တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ရေချိုးခန်းစုပ် faucet Chrome
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ရေချိုးခန်း Faucets / WOWOW Chrome High Arc ရေချိုးခန်းသုံး Faucet
ယင်း၏ချောမွေ့သောလိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီး finish ကို Pop-up ယိုစီးမှုစုဝေးပါဝင်သည်, ဒီတစ်ခုတည်းအပေါက်ရေချိုးခန်းစုပ် faucet မဆိုအာကာသမှကြီးစွာသောဖြည့်စွက်သည်။
ဘယ်တော့မှအသုံးမ ၀ င်တော့သောပုံသဏ္:ာန် - မှန်ကဲ့သို့သောခရုမ်းအဆုံး၌ငွေအင်တုံ ၂၃၂၁၅၀၁C၊ အလွန်ထူးကဲသောအချည်းနှီးသောဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောသုံးပွင့်ကူပုံစံမူပိုင်ခွင့်ဖြင့်သင်၏ရေချိုးခန်းကို ပိုမို၍ ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
2321501C installation ကိုညွှန်ကြားချက်
ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင် 2321501C
အစိုင်အခဲကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစတိုင်ကျသောရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ နောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်! WOWOW သည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်ကိုပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်မည်သည့်ရေချိုးခန်းအလှဆင်ကိုမဆိုစတိုင်ကျလှသည်။ WOWOW ၏ဒီဇိုင်နာများသည် ၄ ​​င်း၏ရေချိုးခန်း faucets နှင့်အထူးထိတွေ့ရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုအမြဲရှာဖွေနေသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ထူးခြားတဲ့ tripe- ကွေးဒီဇိုင်းပါရှိပါတယ်။ သင်သည်ဤဒီဇိုင်းကိုအခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်မှမူပိုင်ရရှိထားသောသုံးဆ - ကွေးသောဒီဇိုင်းသည်ပုံမှန်ရေချိုးခန်းကိုနစ်မြုပ်စေသည့်ရေချိုးခန်းစုပ်ယူမှုသို့ပြောင်းလဲစေသည်။ သံသယမရှိဘဲ!
သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းအသစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသောအခါသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါသင်၏ရေချိုးခန်း faucets များကိုအထူးဂရုပြုချင်ပေမည်။ များသောအားဖြင့်ရေချိုးခန်း faucets များကိုဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များနီးပါး (သို့မဟုတ်ကျော်လွန်လျှင်ပင်) စီမံကိန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်သာရွေးချယ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၏ရေချိုးခန်း faucet နှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောရွေးချယ်မှုများကြောင့်သင်၏ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းကိုအန္တရာယ်ပြုခြင်းမှရှောင်ရှားသင့်သည်။ WOWOW သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရေချိုးခန်း faucets များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းထပ်ခါထပ်ခါသက်သေပြခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းကိုကြော့၊ ဂန္ထ ၀ င်နှင့် / သို့မဟုတ်ခေတ်မီထိတွေ့မှုကိုဖြည့်စွက်သည့်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူရှိနေသည်။ WOWOW တွင်ကျွန်ုပ်တို့သင်ရရှိနိုင်သောငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ပိုက်ဆံအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးနှင့်အတူရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်
WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်အရည်အသွေးသည်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ။ ၎င်း၏အစိုင်အခဲသတ္တုပစ္စည်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာဖြင့်ကြာရှည်ခံသည်။ WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကိုသင်၏လက်၌ကိုင်ထားသောအခါသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာစျေးကွက်တွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောစျေးပေါသောရေချိုးခန်း faucets များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားလိဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် WOWOW သည်ပစ္စည်းများကိုလုံး ၀ ချွေတာခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ရေချိုးခန်းသုံး faucets များ၏အရည်အသွေးကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်သည်အလွန်အမင်းတတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးကိုရှာမတွေ့နိုင်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံချက်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သငျသညျအလားတူရေချိုးခန်း faucet ပိုမိုနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိသို့မဟုတ်အရည်အသွေးတူရေချိုးခန်း faucet တူညီသောစျေးနှုန်းမှာရှာလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အပြည့်အဝပြန်အမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းများမပါဘဲ။
မြင့်မားသော arc spout တွင်ရေချွေတာနိုင်သော aerator ပါရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော Neoperl Aerator သည်နှစ်သိမ့်မှုအတွက်ချောမွေ့နူးညံ့သည့်ရေစီးဆင်းမှုကိုပေးသည်။ ရေဖြန်းတာကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာသင် WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်၏ဤဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်နှင့်ရေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုချွေတာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင် (ပါဝင်သည်) tool ကိုသုံးပြီးအလွယ်တကူဒီ aerator ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်အသုံးပြုသူအတွက်အကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံများကိုပေးစွမ်းရန်အတွက် aerator ကိုမကြာခဏသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခဲယဉ်းသောအကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
မြင့်မားစွာစမ်းသပ်ပြီးရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်
ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသင့်အားအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပေးရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကြွေထည်အဆို့ရှင်ကိုအကြိမ်ပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ထိုစမ်းသပ်မှုအားလုံးပြီးနောက်, အဆို့ရှင်ချောချောမွေ့မွေ့, ယို - အခမဲ့နှင့်ယိုစိမ့်ဆက်လက်ဆက်ပြောသည်။ ပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုသည်တစ်နှစ်လျှင်အဆ ၁၀,၀၀၀ အောက်သာအိမ်သာကိုသာသုံးနိုင်သည်။ ဆိုလိုတာကသင်ဟာဒီရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမဆုံးရှုံးဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်။
WOWOW တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်၏အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် (၃) နှစ်အာမခံသက်တမ်းကိုပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မကြောက်ပါ။ အကယ်၍ ရေချိုးခန်းသုံး faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်သည်ဤသုံးနှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ် faucet ၏စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို၏စိတ်ချပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ကိုအလေးအနက်ထားပြီးသံသယမရှိဘဲယူမည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသစ္စာရှိသောဖောက်သည်များလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသောကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘာမျှမလိုပါ။
အသုံးပြုသူ - လွယ်ကူသောရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်
ရေစီးဆင်းမှုနှင့်၎င်း၏အပူချိန်ကိုဤရေချိုးခန်း faucet ၏လက်ကိုင်တစ်ခုတည်းဖြင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အခြားလက်တစ်လုံးတည်းဖြင့်ရေအပူချိန်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာသင်၏သွားတိုက်နေစဉ်။ ဤအရည်အသွေးမြင့်သောအဆို့ရှင်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုချောမွေ့မှုကိုချက်ချင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဒီလက်ကိုင်ကိုကိုင်တွယ်ရတာအချိန်တိုင်းကျေနပ်စရာပါပဲ။
WOWOW ၏ chrome ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင် chrome တွင်ပါ ၀ င်သည့်ပေါ့ပ်ပါ ၀ င်သည့်အဆို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤသည် Pop-up အဆို့သင့်မီးဖိုချောင်အလှဆင်အတွက်ပို။ ပင်သက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင့်ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်နှင့်အတူတစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအ Pop-up ယိုစီးအဆို့ကိုတစ်ခုတည်းသောစာနယ်ဇင်းနှင့်အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သည်။ ဒါဟာသာလိုအပ်ပါတယ်
operated ခံရဖို့ဖိအားနည်းနည်း။ ၎င်း၏လက်တွေ့ကျသောဒီဇိုင်းကြောင့်သင်၏ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်မှုမှရေကိုလျင်မြန်စွာနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာစီးဆင်းစေနိုင်သည်။
ကိရိယာအစုံရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကို install
အစိုင်အခဲသောကြေးဝါပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကြောင့် WOWOW သည်ခဲမပါသည့်ရေပေးဝေမှုကိုအာမခံနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင့်မိသားစုအားလုံခြုံစိတ်ချရသောရေအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ပြီးရေ၏အရည်အသွေးကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပေ။ အနည်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘဲသင်၏ရေချိုးခန်း faucet ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုကြောင့် WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဒီစွမ်းဆောင်မှုကိုအာမခံပေးနိုင်သည်။
WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာသင်ကရေပိုက်သမားမငှားဘဲသင်ကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်သည်။ ဒီရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကိုအခြားရေချိုးခန်း faucets နှင့်မတူပဲဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်ရင်တောင်မှ။ WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းကိုင်တွယ်ရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာတပ်ဆင်နိုင်မှုကိုအာမခံသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပြည့်ပါ ၀ င်သည်။ ၄ လက်မကုန်းပတ်ပြား (၁ နှင့် ၃ ပေါက်အပေါက်ရှိသောကြိုတင်ကာကွယ်ထားသောရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်မှုများ)၊ chrome pop-up drain၊ ၂၀ လက်မခံနိုင်ရည်ရှိသော Tucai ရေပိုက်သည်အရည်အသွေးကောင်း၊ လက်အိတ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ aerator ဖယ်ရှားသည့်ကိရိယာနှင့်အခြားအရာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်ကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
အနှစ်သာရအားဖြင့်ရေချိုးခန်း faucet တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်၏ကောင်းကျိုးများ -
မည်သည့်ရေချိုးခန်းမဆို wow-factor ကိုပေးသည်
 Do-it-yourself installing kit တွေပါ ၀ င်ပါတယ်
 ၅ နှစ်အာမခံ
SKU: 2321501C Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ရေချိုးခန်း Faucets Tags: ပြီးပြီပွတ်, အိမ်သာ faucet, လူပျိုလက်ကိုင်
ပွတ် Chrome ကို
dual-mode: မှုန်ရေမွှား Mode / Stream Mode
လက်ဝဲ / လက်ယာ / စင်တာ
Matt Black Tall အင်တုံရောနှောပုတ်ပါ